HomeTurkeyMediterranean Region07 Antalya
Ụgbọ okporo ígwè Antalya na ụgbọ ala
Usoro Alanya Na-egosi fficzọ Mgbapụta Ahịrị; Ngalaba na-ahụ maka ngalaba na-ahụ maka okporo ụzọ Antalya, Alanya mere nhazi oge oyi na sistem. Antalya mepere emepe, Alanya obodo nke ụgbọ ala na okporo ụzọ [More ...]
Antalya 3. E bidoro idowe okporo ụzọ na Etap Rail System Line; Antalya Obodo ukwu 3. Ọrụ ndị ahụ dị na eriri Etap Rail System na-aga n'ihu na ọsọ ọsọ. Udị a na-agba n’etiti bọs na Meltem Gate nke Mahadum Akdeniz [More ...]
Antalya Elmali Bus Station na-arụ ọrụ
Mayor Böcek, "Ọdụ ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ a kwesịrị ka Elmalı ot Ewu nke ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ ahụ, nke Antalya Metropolitan Obodo wuru na mpaghara 1000 square dị na Elmalı. Okwulite ala ahu ruru ala n’ulo oru a ekesiri. Onye isi ala Muhittin [More ...]
Ọ Joyụ okporo ụzọ na Manavgat Ahmetler
Antalya Metropolitan Mun Managgat district Ahmetler Agbabeghị agbagọ na warara n'ihi mkpesa nke ụmụ amaala malitere iwu kilomita 9 nke okporo ụzọ. Obodo ukwu na onye isi otu 14 na-aga n’ihu na Ahmetler Quarter nke Manavgat na-aga n’ihu [More ...]
Ego pụrụ iche na mkpọsa maka ụbọchị ndị nkuzi 24 November; Kwa afọ, 24 ewepụtala usoro iji nyere ndị nkuzi aka ịmaliteghachi ntụkwasị obi ha, nke toro na Nọvemba [More ...]
Onye isi obodo nke Antalya Metropolitan Mun Muitittin Böcek rịọrọ ndị nkuzi na Antalya ka ha nye ndị nkuzi nọ na Alanya n'efu n'ihi na 24 mere ọrụ Tünektepe Cable Car na-akwụghị ụgwọ dịka onyinye Daybọchị Ndị nkuzi November. Metropolitan [More ...]
Onye isi obodo nke Antalya Metropolitan Munh Muhittin Böcek, echefula ndị nkuzi na-arụ ọrụ na Antalya, NUMbọchị Ndị nkuzi Nọvemba 24 dị ka onyinye n'ụbọchị ụbọchị T meaningfulnektepe Teleferik bara ụgbọ elu emere n'efu. Kwa afọ n’obodo ukwu Obodo [More ...]
Antalya 3. Usoro Mbido Usoro Mbido amalite na Usoro Ọdụdọ Rail System
Antalya 3. Usoro Azụkọ Banyere Na-ebido na Nrụpụta Usoro Usoro Usoro; 3, nke ga-eweta nnukwu ala maka njem Antalya. Ọtụtụ nzụkọ ga-abanye na Mgbakọ nke Dumlupınar Boulevard na Meltem Boulevard na Raage System Project [More ...]
Tramway, Light Rail Sistemụ (Antray) nke Antalya mepere emepe na-arụ, 18 November 2019 Dị ka ụbọchị Mọnde, a ga-emelite Ọdụ ụgbọ elu Fatih na Fatih Expo Line Antray. Antray Movement ese (18.11.2019) [More ...]
Ego na Busgwọ ụgbọ ala ọha maka ụmụ akwụkwọ nọ na Alanya; Na Alanya, ụmụ akwụkwọ ga-akwụ 2.25 kama nke 1.80. Obodo Antalya Metropolitan zutere na Alanya maka nke abụọ UK Kọmitii na-ahụ maka mkpebi ahụ masịrị ụmụ akwụkwọ si Alanya. ná nzukọ [More ...]
Na-aga n'ihu Construction Projects Ịrịba Speed ​​Railway Lines na Turkey. Designrụ ọrụ iwu ụzọ ụgbọ oloko na-aga n'ihu n’ihu. Antalya-Eskişehir High Speed ​​Train Line [More ...]
Ndokwa nke ANTBİS Stations na ndi otu a: Antalya Metropolitan Obodo, iji kwalite iji ihe eji eme ugbo ala dika nnabata njem na ihe egwuregwu; ANTBIS “Smart Bicycle [More ...]
Nchọpụta Onsite nke Nsogbu Mbugharị ụgbọ mmiri nke Alanya; Obodo Antalya na-ahụ maka iji dozie ọrụ ndị ahụ n'ụzọ dị mfe na obere oge na nyocha saịtị na nzukọ nwa amaala na-ewere ọrụ. N'ọnọdụ a, UK UK [More ...]